တောင်အာဖရိကမှာ ပျားအုပ်ကဝိုင်းတုပ်လို့ ရှားပါးပင်ဂွင် ၆၀ကျော် သေ - ข่าวสด
တောင်အာဖရိကမှာ ပျားအုပ်ကဝိုင်းတုပ်လို့ ရှားပါးပင်ဂ...
တောင်အာဖရိကမှာ ပျားအုပ်ကဝိုင်းတုပ်လို့ ရှားပါးပင်ဂွင် ၆၀ကျော် သေ
20 ก.ย. 2564 - 22:00 น.
တောင်အာဖရိက ကိပ်ပ်တောင်းမြို့နားမှာ ရှားပါးအာဖရိကန်ပင်ဂွင် ၆၃ကောင်ဟာ ပျားအုပ်က ဝိုင်းတုပ်တာခံရလို့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ငှက်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။
အာဖရိကန်ပင်ဂွင်တွေဟာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံ တိရစ္ဆာန်စာရင်းမှာပါပါတယ်။ အဲဒီပင်ဂွင် အကောင် ၆၀ကျော်ကို ဆိုင်မွန်စ်တောင်းမြို့နားက သူတို့အုပ်လိုက် နေတဲ့ နေရာကမ်းခြေမှာ ပျားတုပ်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ တခြားဒဏ်ရာတွေတော့ မတွေ့ရဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဘိုးလ်ဒါးစ်ကမ်းခြေဟာ ပင်ဂွင်တွေကြောင့်ထင်ရှားပြီး အဲဒီကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ခြောက်သောင်းလောက် နှစ်စဉ်လာကြပါတယ်။ အခုလို ပျားတွေက ဝိုင်းတိုက်ခိုက် တာကတော့ အရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ သဘာဝဥယျာဉ်ကအရာရှိတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ပျားတွေနဲ့ ပင်ဂွင်တွေအတူတူ အေးအေးဆေးဆေးနေကြတာပါပဲ" လို့ တောင်အာဖရိကအမျိုးသားဥယျာဉ်များအေဂျင်စီက အဏ္ဏဝါဇီဝပညာရှင် ဒေါက်တာအယ်လီဆင်ကော့က ပြောပါတယ်။
"ပျားတွေက သူတို့ကို ရန်မစရင် တုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုက သူတို့ပျားအုံ၊ အသိုက်တစ်ခုခုကို အနှောင့်အယှက်ပေးခံရလို့ ပျားတွေ အုပ်လိုက် ပျံထွက် လာကြပြီး ဒေါသထွက်နေကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
"သူတို့ ပျံလာရာလမ်းကြောင်းမှာ ကံဆိုးတဲ့ ပင်ဂွင်တစ်အုပ်ကို သွားတိုးမိကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။"
သေသွားတဲ့ ပင်ဂွင်တွေကို ခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ သူတို့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်နဲ့ အတောင်ပံတွေမှာ ပျားတုပ်ခံထားကြရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီနေရာတွေက အမွှေးတွေနဲ့ဖုံးနေတာမျိုး မရှိလို့ အကိုက်ခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ တောင်ပိုင်းအာဖရိက ကမ်းရိုးတန်းငှက်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်းက ဒေါက်တာကတ်တာ လူဒင်နီယားက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပင်ဂွင်တစ်ကောင်ဆို ၂၇ ကြိမ်တောင် အတုပ်ခံထားရတာ တွေ့ရပါတယ်။
ငှက်တစ်ကောင်ချင်းစီမှာ တွေ့ရတဲ့ ပျားတုပ်ခံထားရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကြည့်ရင် အဲဒီလောက်အရွယ်အစားရှိတဲ့ ဘယ်တိရစ္ဆာန်မဆို သေလောက်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာ လူဒင်နီယာက ဆက်ပြောပါတယ်။
ပျားတွေဟာ တုပ်ပြီးရင်သေဆုံးသွားတတ်ကြတာမို့ အဲဒီကမ်းခြေမှာ ပျားသေကောင်တွေလည်း တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
"ပျားက တစ်ခုခုကို တုပ်လိုက်ရင် သူ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ အစေးရည်တစ်မျိုးကို တုပ်ခံရတဲ့သူဆီမှာ ချန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအခါကျ အသိုက်ကို ကာကွယ်နေတဲ့ တခြားပျားတွေ ကလည်း အဲဒီအနံ့ကို ခြေရာခံပြီး တုပ်ခံထားရသူကို လွယ်လွယ်ပဲ ရှာတွေ့နိုင်၊ ဆက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်" လို့ အာဖရိကတောရိုင်းပျားအင်စတီကျူက ဂျင်နီကာလီနန်က ပြောပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့က လူတွေ ကိုယ့်ခြံထဲမှာ ပျားအုံတွေနဲ့ ပျားမွေးထားတာမျိုး မလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေတာပါ။
ပျားတွေဟာ အဆိပ်အတောက်ရှိပေမဲ့ သူတို့ကို ရန်မစရင် မတုပ်တတ်ကြပါဘူး။
အာဖရိကန်ပင်ဂွင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရွယ်အစားကြောင့် ကွဲပြားထင်ရှားပါတယ်။ ဒီပင်ဂွင်တွေဟာ တောင်အာဖရိကနဲ့ နမ်မီးဘီးယားကမ်းခြေတွေမှာ နေကြပေမဲ့ မြောက်စွန်းစွန်းကျတဲ့ ဂါဘွန်နိုင်ငံမှာလည်း တချို့ကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အာဖရိကပင်ဂွင်အရေအတွက်ကလည်း အမြန်ပဲ ကျဆင်းလာနေပါတယ်။ အဓိကကတော့ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေက ငါးတွေမတန်တဆဖမ်းနေကြတာရယ်၊ နောက်တစ်ခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ နိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
တောင်အာဖရိက အမျိုးသားဥယျာဉ်များအေဂျင်စီက ပင်ဂွင်တွေကိုယ်မှာ တွေ့ရတဲ့ အဆိပ်အတောက်ပမာဏနဲ့ သူတို့မှာ တခြားရောဂါတွေရှိနေနိုင်လားဆိုတဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တောင်အာဖရိကမှာ ပျားအုပ်ကဝိုင်းတုပ်လို့ ရှားပါးပင်ဂွင် ၆၀ကျော် သေ